That's so good, right?: Watching
ကျွန်တော့်ရည်းစားက လူမြင်ကွင်း…..အဲ…တနည်းဆိုရရင် public area တစ်ချို့မှာ လိင်ကိစ္စနဲ့ပါက်သက်ပြီး တစ်ခုခု လုပ်ရတာကိုကြိုက်နှစ်သက်နေသလိုပဲဗျ။ သူလိင်ဆက်ဆံတာကို လူကြည့်ခံချင်သလို တစ်ခြားအတွဲတွေလိင်ဆက်ဆံ နေတာကိုလည်း ကြည့်ဖို့ကြိုက်ပါတယ်။ အပြာကားတွေထဲက မြင်ကွင်းတွေကို သိပ်မကြိုက်ဘဲ အစစ်အမှန်မြင်ကွင်းကို ကြည့်ဖို့ပိုသဘောကျသူလို့ဆိုရမှာ။ သူ မီးခိုးအချို့ဝေ့၀ဲနေတတ်တဲ့ Nightclub တွေသွားတာ၊ ဘီယာနည်းနည်း သောက် မယ်…သီချင်းနဲ့အတူကမယ်…..ပြီးရင် ကလပ်ရဲ့နောက်ပိုင်းက အခန်းထဲသွား တခြားလူတွေရဲ့ အမျိုးမျိုးအထွေထွေသော acts of sex ကိုစောင့်ကြည့်ရင်း ကျွန်တော့်ကို သူ့လိင်တံကိုစုပ်မျိုခိုင်းမယ်…..ဒါတွေကို သူအလွန့်ကို နှစ်ခြိုက်ပါတယ်။
သူအကြိုက်နှစ်သက်ဆုံးမြင်ကွင်းက ရှေ့တည့်တည့်ကကြည့်ရတာ (သို့မဟုတ်) dick – to – dick action ကိုပဲပေါ့နော်။ ဘဲနှစ်ပွေ အချင်းချင်း -ီးကိုပွတ်သပ်နေတာ နှုတ်ခမ်းခြင်းတပ်မက်စွာစုပ်နမ်းပြီး ခန္ဓာကိုယ်တွေပွတ်သပ်နေတာတွေကို သူ့ -ီးတစ်ချောင်းလုံး ကျွန်တော့်-င်ထဲထည့်မွှေနေရင်းကနေ အရသာခံကြည့်ဖို့ပျော်ရွှင်သူဖြစ်ပါတယ်။
ပြီးခဲ့တဲ့ စနေနေ့ညကတော့ အထူးတလည်ကို ဟော့တ်တဲ့ညဖြစ်ခဲ့ပါတယ်။ ကျွန်တော်တို့သွားနေကြ နိုက်ကလပ်ကိုသွား ခဲ့တယ်။ ခပ်ဟော့ဟော့တ်ကောင်တွေကို ခေါ်လို့ရတဲ့ ကြည့်လို့ရတဲ့နေရာမို့လေ။ ကလပ်ကတော့ ဘာမှမပြောင်းလဲ ဒီအတိုင်း ဟိုးအရင်ကအတိုင်းပါပဲ။ လူသစ်လေးတွေလည်းအများကြီး မြင်နေကြ လူတွေကလည်းအများသား။ကလပ်က ဘားမှာ အတူထိုင်ခဲ့ကြတယ်။ ပြီးတော့ ကပွဲကြမ်းပြင်ပေါ်က နံပါတ်တွေကို အကြည့်မြှားချက်တွေနဲ့ ပစ်ခတ်ရင်းပေါ့နော်။
ဒွိယံဒွိယံအတွဲတွေ မီးမှိန်မှိန်မှာကနေတဲ့အထဲက အတွဲတစ်တွဲကို မျက်စိကျမိပါပြီ။ သူတို့နှစ်ယောက်စလုံး ပိန်သွယ်သွယ် ဒါပေမဲ့ အရပ်ရှည်ပြီးကြည့်ကောင်းကြပါတယ်။ တစ်ယောက်က အသားဖြူပြီးကြည့်ကောင်းသလို တစ်ယောက်က အသားခပ်ညိုညိုနဲ့ သန်မာပုံပေါက်ပါတယ်။ နှစ်ယောက်သား တစ်ယောက်ကိုတစ်ယောက် စွဲမက်တပ်မက်စွာကြည့်နေရင်း sexy dance ကနေကြတာ ကြည့်တဲ့သူတောင် နိုးကြွပြီး ထကချင်စိတ်ပေါက်မိတဲ့အထိပေါ့လေ။
ကျွန်တော်တို့ အဲဒီအတွဲကို ခဏလောက်စောင့်ကြည့်မိတယ်လို့ပြောရမလား တကယ်တော့ ကျွန်တော့် boyfriend စောင့်ကြည့်နေတာကို ငေးနေရတယ်လို့ပြောရမယ်ထင်တယ်။ ဘာကြောင့်ဆို သူတို့ဖြစ်ပျက်နေတာကို သတိမထားဘဲ ကျွန်တော့် boyfriend ကိုသာ အာရုံစိုက်နေမိလို့ပါ။ အရမ်းချစ်တာလေဗျာ သူ့ကို။
နောက်ဆုံးတော့ သူ ကျွန်တော့်လက်ကို ဆွဲပြီး “Let’s go cutarug” တဲ့ခပ်တိုးတိုးပြောတယ်။ အဲဒါက ကျွန်တော့်ကိုသူနဲ့ တွဲကစေချင်တဲ့အခါတိုင်းပြောနေကျ စကားစုလေးပါပဲ။ ကပွဲကြမ်းပြင်မှာ အတူတွဲကရင်း ဟိုစုံတွဲနား မသိမသာ တိုးကပ်ပြီး ကမိပါတယ်။ နောက်တော့ ကျွန်တော့်ချစ်သူက သူနဲ့ပိုပြီးကပ်သထက်ကပ်အောင် ဆွဲဖက်ပြီး ခန္ဓာကိုယ်နဲ့ချုပ်ကိုင်စပြု လာတယ်။ သူ ဘယ်သူ့ကိုစောင့်ကြည့်နေတယ်ဆိုတာ သူများတွေမရိပ်မိမသိရအောင်ပေါ့နော်။
“သူတို့ နောက်ခန်းထဲသွားလိမ့်မယ်” လို့ကျွန်တော်က နားနားကပ်ပြီး တိုးတိုးပြောမိတော့ “သူတို့နောက်ကို ကိုယ်တို့ လည်း လိုက်သွားနိုင်တာပေါ့ကွ” တဲ့ ကျွန်တော့်ချစ်သူက။ တော်တော်ရင်ခုန်စရာကောင်းမယ့်မြင်ကွင်းတွေ မြင်ရဦး တော့မှာပဲပေါ့ဗျာ။ အကကြမ်းပြင်ပေါ် ခန္ဓာကိုယ်တွေ ယိမ်းနွဲ့လှုပ်ရှားရင်း လိင်စိတ်နိုးကြွစေမယ့်အကတွေကရင်း ဟိုအတွဲ ကို ဖျက်ကနဲလှမ်းကြည့်လိုက်တော့ အသားညိုတဲ့ကောင်လေး….သူ့ကိုယ်ပေါ်က အကျီလျော့ရဲရဲဖြစ်နေသလို အဲဒီလိုဖြစ် နေခြင်းက ကောက်ကြောင်းလှတဲ့ သူ့ကိုယ်ကိုလှစ်ပြနေတဲ့ပုံပေါက်နေပါတယ်။ သူ့ချစ်သူ လူဖြူကောင်လေးကလည်း သူ့ရင်ခွင်ထဲမှာ ယိမ်းနွဲ့လို့ မိန့်မူးနေသလိုပဲ….ဂီတသံတွေနဲ့အတူ အချစ်မူးမူးနေတာပေါ့လေ။
“သူတို့ကိုကြည့်ရတာ တော်တော်လိုက်ဖက်တာပဲ” ကျွန်တော့် bf က မှတ်ချက်ပေးလေရဲ့။ အိုအသေချာဆုံးပေါ့။ “သူတို့အတွဲကို ကိုယ်တို့ကြည့်ပြီး အာရုံစိုက်နေတာကို သတိထားမိကြတယ်လို့ ချစ်ထင်လား” လို့ ကျွန်တော်က မေးလိုက်တော့ “Hmmm…..ဖြစ်နိုင်တာပဲလေ….အဲလိုအကြည့်ခံရတာကိုက မိုက်တယ်လို့ သူတို့ထင်နေမှာ”လို့ ပြုံးပြီးပြန်ဖြေပါတယ်။
နည်းနည်း ညနက်စပြုလာတော့ တေးသံကမြူးကြွနေရာကနေ ငြိမ့်ငြောင်းတဲ့ သံစဉ်ကို ကူးပြောင်းလာတယ်။ ဒွိယံအတွဲတစ်ချို့ကတော့ ထိုင်ခံတွေရှိရာကို လှမ်းလာကြသလို တစ်ချို့ကလည်း ဆက်လက်ပြီး တေးသွားနဲ့အတူ မျောပါလို့ပေါ့။ ဒီအချိန်မှာ ကျွန်တော်တို့အာရုံထား ဂရုပြုနေတဲ့အတွဲကလည်း ကလပ်နောက်ဖက်က နားနေခန်းရှိရာကို တရွေ့ရွေ့ကရင်း ၀င်သွားကြပါတယ်။
“Come on” ရည်းစားက လက်ကိုဆွဲကိုင်ပြီး လူသွားလမ်းလေးအတိုင်း ခေါ်ဆောင်ကာ ရှေ့ကအတွဲနောက်ကို မသိ မသာလိုက်သွားပါတယ်။ ကလပ်နောက်ပိုင်းက အခန်းတွေဟာ မီးအရောင်ကို ခပ်မှိန်မှိန်သာထွန်းထားလေတော့ အတွဲတွေအတွက် စိတ်ကြိုက်ပေါ့နော်။ အခန်းတစ်ခန်းရဲ့ထောင့်နားမှာ ကျွန်တော်တို့ရှာနေတဲ့အတွဲ…… သူတို့ နှုတ်ခမ်းခြင်း ဂဟေဆက် ကိုယ်ချင်းပူးပြီး အလုပ်များနေကြတာကိုတွေ့ရပါတယ်။
ကျွန်တော့်ရည်းစားက နှစ်ယောက်သား အတူတကွကြည့်လို့ရအောင်ရယ် မြင်ကွင်းရှင်းတဲ့အနေနဲ့ရော နောက်ကနေ ဆွဲဖက်လိုက်ရင်း “ဟူး……စိတ်ထဲတစ်မျိုးကြီးပဲကွ….ဟာ ဟ” တဲ့ပြောရော။ မသိတာကျနေတာပဲဗျာ ကျွန်တော့်ကို နောက်ကနေ -ိုးရင်း ရှေ့က show ကိုကြည့်ချင်နေတာလေ သူက။ ရှေ့ကအတွဲကိုကြည့်ရင်း စိတ်တွေပိုပြီးပြင်းပြလာသလို ပါပဲဗျာ။ အသားညိုတဲ့ဘဲက သူ့ရဲ့ဘောင်းဘီကို ချွတ်ချလိုက်သလို အသားဖြူတဲ့ကောင်ကလေးကလည်း ထိုနည်းအတိုင်းပေါ့။ တစ်ယောက်ကို တစ်ယောက် ပွေ့ဖက်ရင်း အချင်းချင်း -ီးကို ပွတ်သပ်နေကြတာ..ရှီး…။ အဲဒီအချိန်မှာ သူတို့ကိုယ်မှာရှိတဲ့ ရှပ်အကျီတွေလည်း ကြမ်းပြင်ပေါ်ရောက်နေတော့တာပေါ့။
အောက်ပိုင်း ရုတ်တရက်အေးကနဲဖြစ်သွားပါတယ်ထင်တာ ကျွန်တော့်ရည်းစားကလည်း ကျွန်တော့်ဘောင်းဘီကိုချွတ်ချ လိုက်တာလေ။ ပြီးတော့ သူ့သွင်းတဲ့အခါအဆင်ပြေအောင်လို့ထင်ပါရဲ့ ကျွန်တော့်ခရေ၀လေးကို လျှာနဲ့ကလိ…. “ရှီး….အာ…..အ….ဖီးလ်ပဲ” လက်ချောင်းလေးတွေ အသွင်းအထုတ်ပြုရင်း လမ်းကြောင်းချောအောင်သူ ပြင်ဆင်ပြန်တယ်။ တင်ပါးတလျှောက် ဖျစ်ညှစ်တာကို ခံစားလိုက်ရသလို မာတောင်နေတဲ့ -ီးတစ်ချောင်းရဲ့ တစ်ထစ်ခြင်းတိုးဝင်လာတာ ကိုလည်း ခံစားမိရပါတယ်။ အနေအထားနည်းနည်း အထာမကျတော့ ပုံစံပြောင်းရအောင် ခဏငြိမ်လိုက်ချိန်မှာ မျက်စိကိုမှိတ် စိတ်ကိုဖြေလျော့ပြီး အတွင်းထဲဝင်လာတဲ့ -ီးရဲ့မာကျောမှုကို ဖီးလ်ယူရင်း ရှေ့ကိုနည်းနည်းကုန်းပေး လိုက်တယ်။
အ -ိုးခံဖို့အဆင်ပြေတဲ့အနေအထားကိုရောက်ပြီ ထင်တော့မှ တင်ပါးကိုတဖြည်းဖြည်းနောက်ပြန်ဆုတ်ရင်း -ီးအဆုံးထိ သွင်းယူလိုက်မိပါတယ်။တငြိမ့်ငြိမ့် တသိမ့်သိမ့်လေး ရှေ့တိုးနောက်ငှင်နဲ့ မွှေနေတဲ့ ကျွန်တော့်ရည်းစားကတော့ ရှေ့က အတွဲကိုကြည့်ရင်း ဖီးလ်ယူနေတယ်ထင်ပါရဲ့ -ိုးတာသိပ်မကြမ်းသေးဘူး ဆောင့်ချက်နှေးနှေးလေးနဲ့။ ဒါကိုပိုကြိုက်ပါ တယ်…..အဆုံးထိသွင်းလိုက်….ကွမ်းသီးခေါင်းပေါ်တဲ့အထိထုတ်လိုက် တစ်ချက်ခြင်း…..အား…..အ။
မျက်စိဖွင့်လိုက်တော့ ရှေ့ကအတွဲက အနမ်းမုန်တိုင်းထန်နေဆဲ။ အခန်းထဲမှာ လူတစ်ယောက်မှ မရှိတဲ့ပုံစံမျိုးသူတို့ တွေလုပ်နေကြတာ။
အသားညိုညိုကောင်ကလေးက သူ့-ီးနဲ့ သူ့ချစ်သူရဲ့ ဒစ်နှစ်ခုပူးကိုင်ပြီး အထက်အောက်ပွတ်သပ်တာကို လုပ်တာများ ကျွမ်းမှကျွမ်း။ အနမ်းတွေ ကိုယ်ခန္ဓာအနှံ့ပျံ့ကျဲကြတယ်။ stoking အတူလုပ်နေကြတယ် မီးအရောင်မှိန်မှန်အခန်းထဲမှာ။ တစ်ယောက်က အသားအရေညိုမောင်း တစ်ယောက်က ဖြူဖွေးနေတာ…..ဘယ်လိုစိတ်လှုပ်ရှားစရာကောင်းတဲ့ လက်တွေ့မြင်ကွင်းလည်းဆိုတာ…အ။
ကျွန်တော့်ရည်းစားကလည်း သူတို့ကိုကြည့်နေရင်း tempo မြင့်လာတာကို နားရွက်နားက လေပူနွေးနွေးနဲ့ အသက်ရှူသံ မြန်ဆန်မှု ပြီးတော့ ခါးကိုကိုင်ထားတဲ့ သူ့လက်ရဲ့တင်းကြပ်လာမှုတွေက ပြသနေပါတယ်။ အဖြူကောင်လေးက နမ်းစုပ် နေတဲ့ နှုတ်ခမ်းကိုခွာလိုက်ရင်း မျက်စိကိုမှိတ်နှုတ်ခမ်းတွေကိုလျှာနဲ့သရပ်လိုက်ရင်း သူ့ချစ်သူပေါ်မှီ နားနားကပ်ပြီး ခပ်တိုးတိုးစကားဆိုလေရဲ့။ ဘာပဲပြောပြောလေ ခပ်တိုးတိုးညည်းညူသံနဲ့အတူ သူ့ချစ်သူရဲ့ခပ်ညိုညို belly သားတွေ အပေါ် နို့အဖြူရောင်တွေ ပန်းထုတ်လိုက်ပုံက ကြည့်လို့ကောင်းသေးတော့တာ။ သူထွက်တော့မယ်ဆိုတာကို ကပ်ပြော တယ်နဲ့တူပါတယ် လူညိုချောလေးက ခန္ဓာကိုယ်ကိုတင်းကြပ်စွာဖက်တယ်၊ ပွတ်သပ်ပေးရင်း ကောင်းကောင်းဆက်တိုက် လက်ကစားပေးလိုက်တာကိုး။
ကျွန်တော် လူညိုချောလေးရဲ့ climax ရောက်ဖို့ဆက်လက်လှုပ်ရှားနေပုံလေးကိုလည်း မမှိတ်မသုန် ဆက်ကြည့်ဖြစ်နေ ပါတယ်။ ညိုညိုတုတ်တုတ် ဒစ်ကိုဖြဲပြီး -ွင်းတိုက်လိုက် နားလိုက် ဆက်တိုက်လှုပ်ရှားလိုက်လုပ်နေတာ….ကြည့်နေတဲ့သူမှာ သွားပြီး ကိုင်တွယ်ချင်စိတ်ကိုမနည်းထိန်းရမယ်။ အာ….သူတို့ကိုကြည့်ပြီး ကျွန်တော့်လည်း မကြာခင်ပြီးတော့မယ် ဆိုတာကို ခံစားမိလာတယ်။ ပြီးတော့ ကျွန်တော့်ရည်းစားရဲ့ -ီးကလည်း ပိုပြီးကြီးထွားလာသလို မာကျောတောင့်တင်းမှုကို လည်း -င်ထဲက ကြွက်သားတွေက အာရုံရနေလေတော့ မကြာခင်သူလည်း ပြီးတော့မှာပေါ့လေ။
ကျွန်တော့်ပခုံးသားတွေ ဂုတ်သားလေးတွေကို ခပ်ဖွဖွကိုက်ရင်း နောက်ကခပ်ပြင်းပြင်းညှောင့်….မွှေ….လုပ်နေတော့ မထိန်းနိုင်တော့ပါဘူး။ ဒူးတွေလည်း ညွှတ်ကျချင်လာသလို…..ခပ်သွယ်သွယ်လေး -ုရင်း ပန်းထုတ်မိပြီပေါ့….အ…အ အ…. သုက်ရည်တွေ။ တဆက်တည်းမှာပဲ ကျွန်တော့်ရည်းစားရဲ့ မိန့်မူးတက်ကြွသံကိုကြားရလေတော့ သူလည်းပဲ သူ့ပန်းတိုင်ကို ရရှိသွားမှန်း ခပ်ပြင်းပြင်းလေးကို ခံစားသိရှိလိုက်ရပါတယ်။
ဟူး…..ကိုယ့်ကိစ္စပြီးတော့ ရှေ့ဘက်ကိုအာရုံပြန်စုစည်းမိတာမှာ ကျွန်တော်တို့ကြည့်နေခဲ့တဲ့ ဘဲနှစ်ပွေက သူတို့ကိစ္စပြီး ဆုံးလို့ ကျွန်တော်တို့ကို ပြန်ကြည့်နေတာပါလား။
နှစ်ယောက်စလုံး ပြုံးဖြီးဖြီးနဲ့ မျက်ခုံးတွေပင့်ပြပြီး “live show ပြရတာပျော်နေကြတယ်ပေါ့” ဆိုတဲ့အကြည့်အထာတွေနဲ့ ကြည့်နေပုံက ရယ်ဟဟ။ ဘာပြန်ပြောနိုင်မှာလဲ သူတို့ကို……
ကျွန်တော့်ရည်းစားက “စောင့်ကြည့်နေတာကို ကြိုက်လားဗျ” တဲ့…အဟင့်။
Alex Aung (27 November 2013)
Note: ဇာတ်လမ်း ဇာတ်ကွက် သိပ်မရှိပေမဲ့ သူငယ်ချင်းတို့အပျင်းပြေဖို့ရည်ရွယ်ပါတယ်….။
Posted by Alex Aung at 5:26 AM